Lozam-pifamoivoizana Maty ilay vazaha sy ny olon-tiany
Fanampiana tsy tonga Nitokona ny mpamily taxi-be eny Ivato
Nitokona nanoloana ny toeram-pivarotan-tsolika iray ao Ivato avokoa omaly maraina ireo mpamily taxi-be sy ny mpanampy azy ao amin’ny zotra D izay mitontaly 2.000 eo ho eo.
Fiara nifanenjika nandona olona Mpivady maty teo noho eo
Mpivady no voadonan’ny fiara teny amoron’Imamba amin’iny làlam-baovao Soavimasoandro iny omaly tokony ho tamin’ny 9ora sy sasany maraina.
Fahazoan-dalana manokana hivezivezy Inona avy ireo taratasy ilaina ?
Filaharam-be tsy nisy toy izany ny teny amin’ny “Centre de commandement opérationnel” COVID 19 eny Ivato afak’omaly ho an’ireo nikasa haka taratasy fahazoan-dalana manokana hivezivezy eto Antananarivo
Taxi be eto an-drenivohitra Matiantoka 50 000 ariary isan’andro
Mamotika asa fihariana maro eto amintsika ny fisian'ilay otrik'aretina coronavirus. Ankoatra ny tsy fahafahana manohy araka ny tokony ho izy ny fiainana andavanandro dia fidiram. bola maro no mihitsoka.
Fitaterana Manjaka tokana ireo Taxi moto
20.000 Ar ny saran-dalana hitondran'ny taxi moto ny olona iray mankany Imerintsiatosika. Nanomboka ny Alatsinainy teo no nitrangan'izany.
Fifaterana any Ambatondrazaka Miha gaboraraka tanteraka
Goragora tanteraka ny fifampifehezana eo amin’ny lalànan’ny fifamoivoizana amin’ireo fitaterana any Ambatondrazaka. Miha mahazo
LALANA ETO AN-DRENIVOHITRA Simba ny ankamaroany, tsy misy tompon’andraikitra mijery
Simba ny ankamaroan’ireo lalana eto an-drenivohitra. Raha somary azoazo kely izany teo aloha teo dia nahazo vahana sy niitatra indray hatramin’ny niavian’ny ranon’orana ny herinandro teo.
Faran’ny herinandro feno lozam-pifamoivoizana teto an-drenivohitra. Tena nahontsa ny maro ny fisian’ilay teratany vahiny izay niara-maty tamin’ny sakaizany tetsy amin’ny manodidina ny seranam-piaramanidina Ivato omaly maraina.
Nandeha moto izy roa. Nidona tamin’ny andrin-jiron’ny Jirama ny môtô nentin’izy ireo. Maty tsy tra-drano ilay vazaha. Ilay vehivavy Malagasy kosa mbola tokony ho avotra saingy niandry ela loatra noho ny tsy fisian’ny fiara nety nitondra azy teny amin’ny hopitaly ary dia lasa ihany ny ainy. Nojeren’ny olona fotsiny teo izy izay efa tsy afa-nihetsika intsony. Raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso teny an-toerana dia mbola velona tsara ilay vehivavy taorian’ilay loza. Ny tena nahavariana dia saika tsy rototra avokoa ny olona teo amin’ny manodidina nandritra ny loza nahazo azy roa mpifankatia ireo. Toraka izany koa ireo fiara izay nandalo sy nahita maso ny loza izay tsy nisy rototra ny hampiditra azy tao anaty fiara ary hitondra azy amin’ny hopitaly. Zava-dehibe ny fifamonjena ary azo henjina sy helohina amin’ny lalàna ny tsy firaharahiana sy tsy fandraisana andraikitra amin’olona tra-doza.